Air France na-anwale IATA Travel Pass na ụgbọ elu Montreal-Paris
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa akụkọ Canada » Air France na-anwale IATA Travel Pass na ụgbọ elu Montreal-Paris
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ na -agbasa akụkọ Canada • Akụkọ kacha ọhụrụ na France • Akụkọ Ahụike • investments • News • Ịrụ ọrụ • Technology • Tourism • Okwu Nlegharị Anya • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Usoro ihe omume a ga-elekwasị anya na ụgbọ elu Air France na-apụ apụ site na Montréal-Trudeau ruo Paris-Charles de Gaulle, site na June 24 ruo July 15, 2021.
Air France ghọrọ ụgbọ elu mbụ webatara mmemme pilot maka ọpụpụ ụgbọ elu na ọdụ ụgbọ elu Montréal-Trudeau.
Ebumnuche mmemme bụ ịnwale ngwa mkpanaka IATA Travel Pass nke International Air Transport Association.
Ikpe a bụ n'efu maka ndị ahịa ma nye ya na afọ ofufo.
Site na itinye Montreal-Paris na ụgbọ elu ya na-anwale ngwa IATA Travel Pass, Ikuku France -abụ ụgbọ elu mbụ iwebata usoro mmemme maka ọpụpụ ụgbọ elu na Ọdụ ụgbọ elu Montréal-Trudeau na-enyocha nsonaazụ ule COVID-19 na-adịghị mma. Ya na ndi Biron Health Group n’eme mmemme a.
Usoro ihe omume a ga-eleba anya na ụgbọ elu Air France na-apụ apụ site na Montréal-Trudeau ruo Paris-Charles de Gaulle, ka ọ dị na June 24 ruo July 15, 2021. Ebumnuche ya bụ ịnwale ngwa ngwa IATA Travel Pass nke International Air Transport Association nke ga-enyere ndị njem:
Lelee maka ihe ọhụrụ chọrọ COVID-19 metụtara chọrọ maka obodo ha
Nwee nsonaazụ nke ule COVID-19 emere na laboratọ ndị mmekọ zitere ozugbo na ngwa ahụ
Chekwaa akwụkwọ ndị a na ngwa ahụ ka ha wee nwee ike igosi ndị ụgbọ elu na ndị nwe obodo na ha zutere ihe ntinye chọrọ dị mkpa, na-enweghị ịkọwakwuru ozi gbasara ahụike nke onwe ha.
Ikpe a bụ n'efu maka ndị ahịa ma nye ya na afọ ofufo. Ọ bụ oghe nye ndị ahịa na-aga njem ụgbọ elu ndị France na-arụ ọrụ na Paris dị ka ebe ikpeazụ.
A ga-anwale ule na ụlọ ọrụ Biron Health Group nke dị na Montréal-Trudeau International Airport. Ndị njem tozuru etozu ga-enweta ọkwa ụbọchị ole na ole tupu ha apụọ na Paris. Enwere ike ịnwale ule n'ụbọchị ọpụpụ maka ndị njem dị afọ 11 na karịa ndị na-enweghị ọgwụ mgbochi ma ọ bụ naanị nata ọgwụ mbụ ha, ebe achọrọ ka ha gosipụta ihe ngosi PCR na-adịghị mma ma ọ bụ nsonaazụ antigen nke enyere n'ime awa 72 maka njem ha. banye France.
Kedu usoro onye njem ga-agbaso?
Onye njem ahụ na-ebudata ngwa IATA Travel Pass dị na Storelọ Ahịa Apple na Google Play ma rụọ ọrụ ya site na iji koodu nke France France butere.
Ọ na-ede akwụkwọ maka oge PCR ya ma ọ bụ antigen na ebe nrụọrụ weebụ Biron Health Group. N'oge ule ahụ, ọ na-ajụ ka etinye nsonaazụ ya ozugbo na IATA Travel Pass
N’ọdụ ụgbọ elu, onye njem ahụ gara na tebụl Air France SkyPriority. Mgbe ị na-enyocha usoro eji eme njem, ọ na-ewepụta ekwentị ya karịa nsonaazụ e biri ebi